काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उद्योग विभागदेखि सबै निकायलाई प्रभावमा पारी लाभकर नतिरी उम्किंदैआएको एनसेलले पछिल्लो समयमा अदालतमा रिट दायर गरी पटक पटक गरी ४० अर्ब रुपैयाँ मुनाफा विदेश लगेको बिषय पुनः उठेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनासाथ फैसलाको पूर्ण पाठ नै प्राप्त नगरी राष्ट्रबैंकले हतार हतार मुनाफा लैजान डलर सटही सुविधा दिएको थियो । अदालतले आदेश दिए पनि… विस्तृत समाचार
काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट आइतबार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश भएपछि ट्रेड युनियनको नेतृत्व तहमा बसेकाहरु कहाँ खटाइन्छन् भन्ने चासो झापादेखि कन्चनपुरसम्मका कर्मचारीबीच चासोको बिषय बनेको छ । ट्रेड युनियनमा बसेर रजगज गर्दैआएकाहरु अब स्थानीय तहमा जान्छन् त ? समायोजन अध्यादेश जारी भएपछि यो सवाल निकै पेचिलो रुपमा उठेको छ । समायोजन ऐनले ज्येष्ठताकाआधारमा कर्मचारी खटाउने ब्यवस्था गरेको छ । ज्येष्ठताका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्दा जुनियरहरु जति सबै… विस्तृत समाचार
काठमाडौँ । नेपालमा निजामती सेवाका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेमा छानबिन गरी कारबाही गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलभित्रको भ्रष्टाचार पनि अख्तियारले हेर्न पाउँछ । तर न्यायालय र सेनाभित्रको भ्रष्टाचार अख्तियारलाई छानबिन गर्ने अधिकार छैन । नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार नै न्यायालय र सेनामा छ भन्ने जगजाहेर बिषय हो । न्यायालयको भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार न्यायपरिषदलाई… विस्तृत समाचार
काठमाडौँ । केही हप्ता अघि सरकारले प्रस्ताव गरेका विभिन्न देशका राजदूतको संसदीय सुनुवाई समितिमा सुनुवाई भएको छ । भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत निलाम्बर आचार्य, मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, युएईका लागि कृष्णप्रसाद ढकाल र इजरायलका लागि प्रस्तावित डा. अञ्जान शाक्यको बारेमा सुनुवाई भएको हो । प्रस्तावित राजदूतले समितिमा आ–आफ्ना योजना सुनाएका छन् । इजरायलसँगै साइप्रसका लागि प्रस्तावित राजदूत डा। शाक्यले इजरायलबाट अत्याधुनिक कृषि प्रविधि भित्र्याएर नेपाललाई… विस्तृत समाचार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल संघीयता कार्यन्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएकोले आफ्ना अनुभवहरुबाट सिक्दै यसलाई मजवुद बनाउनु पर्ने बताउनुभएको छ । अन्तर प्रदेश परिषदको पहिलो बैठकलाई आज सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता नेपालको लागि नयाँ विषय भएकोले यसलाई संरचनागत रुपमा बलियो बनाउन आफैं लाग्नु पर्ने बताउनुभएको छ । “मूख्य मन्त्रीको कार्यलय,प्रदेश मन्त्रीको कार्यलय,आवास जस्ता कुरा केही… विस्तृत समाचार
​स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक अभियान चलाउने उद्देश्यसहित मेडिकल सोसाईटी
काठमाडौं । चिकित्सकहरुको साझा संस्थाको रुपमा २०७४ सालमा स्थापना गरिएको युनाईटेड नेशनल मेडिकल सोसाईटी अफ नेपालको बिधिवत रुपमा उद्धाटन गरिएको छ । शनिबार स्वास्थय तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र कुमार यादवले संस्थाको उद्धाटन गरे । युनाइटेड नेश्नल मेडिकल सोसाइटी अफ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष डा.चन्दन रमनको नेतृत्वमा रहेको संस्थाले उद्धाट पूर्व पनि बिभिन्न सामाजिक काम गरिसकेको छ । प्रत्येक चिकित्सकले कम्तीमा महिनाको एक दिन केही समय… विस्तृत समाचार
गृहमन्त्री बादलसँग चिनिया राजदुतको बिदाई भेट
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग नेपालका लागि चिनका राजदुत यु होङले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । गृहमन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल–चिन सम्बन्ध, आपसी सहकार्य र आगामी दिनमा सहयोगका विषयमा केन्द्रीत रहेको थियो । आफ्नो कार्यकाल सकेर केही दिनमै स्वदेश फर्कन लाग्नुभएकी राजदुत होङलाई गृहमन्त्री थापाले नेपालमा उहाँको सफल कार्यकालका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी यात्राका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । राजदुत होङले आफ्नो कार्यकालमा… विस्तृत समाचार
काठमाडौँ । राज्यका तीनमध्ये दोस्रो महत्वपूर्ण अंग न्यायालय यतिबेला नेतृत्व परिवर्तनको संघारमा छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आगामी पुस १६ बाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले उनीपछि न्यायालयको नेतृत्व कसको हातमा जाला भन्ने चौतर्फी चासो छ । न्याय परिषद्ले मिश्रपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश रहेका दीपकराज जोशी र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्समक्ष अनुमोदनका लागि पठाएको छ । तर, सोमबार बसेको परिषद् बैठकले कुनै निर्णय… विस्तृत समाचार
​प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अख्तियारमा गोप्य बैठक
काठमाडौं । कमजोर टिमका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ–नयाँ विवादमा फसिरहेका छन् । यतिबेला संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरु प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लागेका छन् । मुख्यसचिवका कारण उनीहरु प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लागेका हुन् । स्रोतका अनुसार हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संवैधानिक आयोगहरुलाई समेत कार्य प्रगति र योजना माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सबै सरकारी निकायहरुलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।… विस्तृत समाचार